How Can We Prevent Evictions? - McKnight Foundation
Daawo fiidiyaha oo leh cutubyo Isbaanish ah iyo sawiro.
Beelo xoog leh, oo firfircoon ayaa ka bilaabmaya deganaansho deggan.
Iyada oo ay jirto korodhka kirada iyo mushaharka joogtada ah, dad badani waxay ku nool yihiin hal talaabo oo ka fog sidii ay u waayaan guryahooda — baabuur jabay, ilmo xanuunsan, ama shaqo la'aantu waxay qof u soo diri kartaa dariiqa guriga.
Gobolka Minnesota, in ka badan 16,000 ka saarid ayaa sanad walba la xareyaa, taas oo leh cawaaqib xumo.
Marka sidee looga hortegi karaa ka saarista? Waa kuwan seddex fikradood:
Mid, waxaan horumarin karnaa helitaanka lacagaha degdegga ah. Kirada la waayayaa waa qodob ka mid ah ka saarista guriga oo dhan, badiyaa waa lacag bixin ama laba. Lacag xoogaa ah ayaa qoysaska ka iibsan karta waqti ay ku soo ceshadaan cagahooda, iyagoo ka hortagaya ka saarista iyo hoy la’aanta.
Xeelad kale waa dhexdhexaadinta.
Heshiisyada mulkiilaha iyo kiraystaha ee dhexdhexaadintu waxay ku guulaysteen 75% wakhtigaas, waxayna u badan tahay inay keenaan ka saarid.
Dhex dhexaadintu waxay caawisaa kiraystayaasha iyo milkiileyaasha guryaha, iyo canshuur bixiyeyaasha, iyagoo badbaadinaya qof walba waqti iyo lacag.
Saddexaad: U istaag guryaha kireystayaasha
Derisyadu way soo dhaweyn karaan kireystayaasha waxayna u doodi karaan ilaalintooda sharciga ah.
Iyada oo saqafka ka sareeya madaxooda, carruurtu waxay ku fiicnaadaan dugsiga, shaqaaluhu waxay diiradda saari karaan shaqooyinkooda, xaafadaha ayaa noqda kuwa amaan ah, qof walbana faa'iido buu helayaa!
Fikradahan waa dhowr meelood oo laga bilaabayo. Waxaan ugu dambeyntii u baahanahay xalka guud si aan u hubinno in dadka dhammaan heerarka dakhli ay haystaan meel ay ugu yeeraan gurigooda.
Warbixinno dhaweyd iyo Qormooyinka:
"Sawirka Xulashada: Feejignaanta iyo Faa'iidada Waqooyiga Minneapolis," Xarunta Magaalada iyo Arimaha Gobolka (CURA), May 2019.
Daraasadda "U of M" waxay si qoto dheer ugu taabanaysaa masaafurintii woqooyiga Minneapolis, MinnPost, May 31, 2019.
“Fasaxyada ayaa kusii kordhaya Rochester; kooxdani waxay isku dayeysaa inay joojiso. Muuqaalka MPR, Maarso 3, 2019.
"Ka hortagga guri ka saarida ayaa diiradda saareysa la-dagaallanka guri-la'aanta ee gobolka Minnesota," Star Tribune, Febraayo 9, 2019
"Dhex dhexaadiyayaashu Wax Ka Sareen Saqafka Deg degga ah," Southwest Journal, Abriil 3, 2018.
Kheyraadka Dheeraadka ah:
Xor baad u leedahay inaad si ballaaran ula wadaagto fiidiyowgan ama u isticmaal sida kheyraadka bulshadaada. Waad wadaagi kartaa isku xirka ama kala soo bixi fiidiyowga adoo raacaya xiriirinta oo gujinaya batoonka soo degsiga fiidiyowga hoostiisa.
Booqo Shaybaar Ka Saarida si aad u aragto sicirka guri-ka-saarista ee bulshadaada, u aragto qiimeynta meela badan oo dalka ka mid ah, iyo inaad wax ka ogaato dhibaatada guriyeynta Mareykanka adigoo la falgalaya khariidadaha la beddeli karo
Sanadka 2019 Akhri Brave Saint Paul dulucdu waa guryeyn, waana mowduuc muhiim ah oo ku yaal Saint Paul halkaasoo kumanaan kun oo qof ay halgan ugu jiraan sidii ay guryo ku heli lahaayeen. Akhriska Brave waa barnaamij magaalada oo dhan ah, barnaamij isdhaxgal oo dhaxdhaxaad u ah mawduuc guud oo quseeya magaalada.
Eeg warbixinno kala duwan oo guriyayn ah oo dhowaan soo baxa oo aan waxbadan ka ogaano shaqooyinka kale ee ay McKnight ku taageerto iyada oo loo sii marayo barnaamijkeeda 'Regional & Communities'.
Hadaad jeceshahay inaad ka Caawiso Ka Hortagga Saarrinta:
Tabaruc noqo si aad u noqoto dhexdhexaadiye.
Ku tabaruc Beelaha CommonBond ama Khadka HOME.
Ku tabaruc koox aan faa'iido doon ahayn oo taageera kireystayaasha iyo guryo la awoodi karo.
Ku muuji taageerada aad u kireysanayso baraha bulshada.
Ku biir isbahaysi sida Guryaha loogu talagalay All ama Iridda Horumar Barwaaqo.
Haddii aad wajahayso guri ka saarid:
Codso dhexdhexaadin oo ka socda Dhex-dhexaadinta Bulshada ee Minnesota.
Baro wax ku saabsan gargaarka degdegga ah.
Ka hel caawimaad sharciyeed bilaash ah Khadka HOME ama Shabakadda Qareennada Tabaruca.
Mu'asasada 'McKnight Foundation' waxay jeceshahay inay u muujiso mahadnaqdeeda dhammaan intii gacan ka geysatay soo saarista fiidiyowgaan.
MUUQAALKA MUUQAALKA MUUQAALKA
Juan Bedolla, Naqshadeynta dhaqdhaqaaqa iyo jilitaanka
Jas Patrick, Naxdin
Na Eng, Agaasimaha Isgaadhsiinta
Molly Miles, Digital Storyteller